Muuri News Network » XOG: Halis Aadan Ogeyn Oo Ka Socota Magaalada Baydhabo Shariifa Xasan oo lasoo Baxay Sirtii lagu…
XOG: Halis Aadan Ogeyn Oo Ka Socota Magaalada Baydhabo Shariifa Xasan oo lasoo Baxay Sirtii lagu…
Wararka naga soo gaarya magaalada baydhabo ayaa sheegaya in uu kasocodo magaalada baydhabo ol ole balaaran oo lagu doonayo in markale dib looga doorto madaxweynaha koonfur Galbeed Xhariif Xasan.
Xildhibaano iyo wasiiro ka kala tirsan dowlada federalka iyo kuwa maamulka kg ayaa bilaabey dedaalo dib looga dooranaayo madaxeyne Shariif Xasan Sheekh Aadan, arintaan ayaa imaaneysa kadib heshiis dhexmarey maalmo kadib qaar katirsan siyaasiyiinta reer awdigil isagoona ku qanciyey in ay soo tartami karaan hadey doonaan taas oo siyaasiyiintan u arkeen fursad, balse markii horaba dastuurka u ogolaa.
Shariif Xasan ayaa xildhibaanada reer awdigi ee mucaaradka ahaa kala jebiyey ayadoona habeenadii lasoo dhaafey xildhibaanadaas oo koox koox u socoda lagu arkayey guriga Shariif Xasan ee kuyaala magaalada Mogadisho waxaana arintaa naxdin iyo amakaag kunoqotey siyaasiyiintii dhoor maalin kahor kugula heshiiyey in siyaasada reer aw digil kaga danbeyn doono ayaga. eng. Saalahna Gudoomiye Baarlamaanka KG kadhigi doono ama wasiir dowlada dhexe uu kasiin doono ayadoo khaalidna loobalan qaadey wasiir kuxigeen ama lacag uu kushaqeysan karo.
Dhanka kale wuxuu lakulmey xildhibaanada reer aw Digil isagoona usheegey in siyaasiyiintii uu lasoo heshiiyey ay usheegeen in siyaasada reer awdigi ayaga keliya lagala hadli karo xildhibaana aan wax shuqul ah kulaheen, arintaan ayaa waxey ka careysiisey xildhibaanadii ayagoona shariif xasan ubalan qaadey in ay dib udooran doonaan keliya hadii uu isga toos ula macaamilo xildhibaan ahaan hadii kalana ay yihiin kuwa codkooda xor u ah arintaas oo aheed mid isgaba markii horel doonayey.
Dhinaca kale siyaasiyiinta heshiiska qaadatey ayaa ku doodayey in ay cod kaga qaadi doonaan hadii latartamo arintaas oo shariif xasana hada kahor dhacey waxaana hada muuqata hadii ay isku dayaan in ay latartamaan xitaa aanu cod kaheli doonin xildhibaanadooda maadaama loo kala waramey.
Isaga oo kafaaideysanaya khilaafkaas ayaa waxaa uu bilaabey in uu u ol oleeysto markale si uu mudo kordhin 4 sano ah u helo ama doorasho afduub u ah dib looga doorto magaalada Baraawe si beesha caalamka iyo dowlada federalka ugu muujiyo in uu yahay madaxweyne sax ah
Waxaana xusid mudan in maalmihii dambe walwel xoogle soo food saarey arintaas oo loo aaneynayo isaga oo deris unoqdey hirar mucaarado dal iyo dibad ah.